Umaki: i-klout | Martech Zone
IHeatSync inikeza izindlela zokuqoqa idatha engafani neye-analytics emithonjeni eminingana ehlanganisiwe, ihlele imininingwane, iyigcine, futhi iyethule ngendlela enikeza ukuqonda okuthuthukile ngokuhamba phambili nokusebenza kwewebhusayithi. I-HeatSync idonsa idatha kusuka ku-Alexa, SimilarWeb, Compete, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase ne-WOT ukuqedela iphrofayli, umugqa wesikhathi kanye nenjini yokuqhathanisa yesiza sakho. Iphrofayli Yewebhusayithi - Iphrofayili Yewebhusayithi ye-HeatSync iveza umbono oningiliziwe kuzo zonke izici
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi izinkundla zokuxhumana zihluke kakhulu ezinhlosweni nasezimpawu zabo. Le infographic evela kwi-2013 Social Media Strategies Summit yehlisa imikhakha kahle. Lapho uhlela isu lenkampani yezenhlalo, inani elikhulu lamathuluzi atholakalayo ekuphathweni kwemithombo yezokuxhumana lingaba likhulu kakhulu. Sihlanganise amathuluzi amahle angama-25 okwenza ukuthi wena neqembu lakho niqale, zihlukaniswe izinhlobo ezinhlanu zamathuluzi: Ukulalela Komphakathi, Ingxoxo Yomphakathi, Ukumaketha Komphakathi, I-Social Analytics
Izikolo zeKlout ziphinde zavuselelwa… futhi ngiyayithanda!
Ngangike ngezwa ngeKlout isikhashana esedlule kepha angizange nginake kakhulu ngaze ngahlangana neqembu leKlout eLas Vegas. Ngikuhlolile ngathola ukuthi ezinye izikolo bezishoda. Isibonelo, iningi lethu lalinamakhasi amaningi, ama-akhawunti amaningi, nomlando oku-inthanethi owathatha iminyaka eyishumi… kepha iKlout ayizange ithinteke kukho konke lokho. Ngesikhathi sokugcina uKlout evuselela amaphuzu, bangilahlekela ngokuphelele. I-
NgoLwesine, July 5, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Izinombolo zibalulekile uma kukhulunywa ngokukhangisa online. Bengigxeka iKlout kepha ngisathanda ukuthi izinkampani zizama ukwenza amamethrikhi alula ukunquma izindawo nabantu abanethonya online. Angizenzi sengathi ngiqonda kakhulu amaphuzu eKlout, futhi angikhathazeki ngakho kakhulu. Kepha… ngezikhathi ezithile, ngiyabheka esikalini sami seKlout (uhlelo lokusebenza lweKlout iPhone ake ulibonise!). Uma ungathanda
NgeSonto, uDisemba 18, i-2011 Douglas Karr
Kunokunyakaza okuningi okwenzekayo njengamanje embonini yokushaya amagoli. Ngicabanga ukuthi uKlout usethole ukugxekwa okuncane muva nje… kunzima ukuba ngumuntu wokuqala ebhlokweni kunoma yimuphi umkhakha. Ngiyabonga ukuthi othile uthathe umsebenzi onzima wokwenza amaphuzu okuqala egunya embonini, noma kunjalo, futhi ngiyethemba ukuthi bayakwazi ukuguqula ubuchule babo futhi baqhubeke nokuzithuthukisa. Omunye wabancintisana naye ngibona kukhasa
ULwesithathu, April 21, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Ukunaka abathengisi bezokuxhumana: inani labalandeli aliyona inkomba enamandla yethonya. Impela… kusobala futhi kulula - kepha futhi kuyavilapha. Inani labalandeli noma abalandeli kaningi alihlangene nomuntu noma ikhono lenkampani lokuthonya abanye. Izici Eziyisikhombisa Zethonya ku-Intanethi Umgqugquzeli kumele ikakhulukazi ahlanganyele ezingxoxweni ezifanele. Umlingisi onabalandeli be-bajillion akusho ukuthi angathonya abanye maqondana nomkhiqizo wakho